Ahoana ny fomba hampitomboana ny laharam-pikarohana amin'ny alàlan'ny fitadiavana, fanaraha-maso ary famerenana ireo lesoka 404 ao amin'ny WordPress | Martech Zone
Alarobia, Febroary 24, 2021 Alakamisy 24 martsa 2022 Douglas Karr
Manampy mpanjifa orinasa izahay izao amin'ny fampiharana tranokala WordPress vaovao. Toerana marobe izy ireo, multi-teny asa aman-draharaha ary nanana valiny maharatsy momba ny fikarohana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Rehefa nikasa ny tranokalan'izy ireo vaovao izahay, dia nahita olana vitsivitsy:
Tahiry - nanana izy ireo tranonkala marobe tato anatin'ny folo taona lasa miaraka amin'ny fahasamihafana azo porofoina amin'ny firafitry ny tranokalan'izy ireo. Rehefa nanandrana ireo rohy pejy taloha izahay dia 404'n tao amin'ny tranokalan'izy ireo farany.
backlinks - rehefa nanao audit backlink izahay tamin'ny fampiasana Semrush,
Translation - Hispanika ny ankamaroan'ny mpihaino azy ireo, fa ny bokin'izy ireo dia tsy niantehitra afa-tsy tamin'ny bokotra fandikan-teny fa tsy nametraka pejy voadika, voadika tanana amin'ny tranokala.
Ny tranokalan'izy ireo farany dia owned nataon'ny masoivoho SEO niasan'izy ireo… raha ny fahitako azy dia fanao tena manjombona izay mitazona ny tompona orinasa ho takalon'aina. Noho izany, mandroso dia tsy maintsy mamorona tranonkala vaovao tanteraka isika avy eo am-boalohany ary manatsara azy… vola be ho an'ny mpanjifa.
Ampahany lehibe amin'ny paikady vaovao ny manararaotra ireo laharana 3 etsy ambony. Mila mahazo antoka isika fa mampiditra ny fanodinana ny pejy tsy hita rehetra (lesoka 404) ARY afaka mampiasa vola amin'ny mpampiasa fikarohana marobe amin'ny fiteny maro izy ireo amin'ny fanampiana pejy voadika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny Olan'ny hadisoana 404 - satria manimba ny filaharan'ny motera fikarohana azy ireo izany.
Maninona ny lesoka 404 no ratsy amin'ny laharana SEO
Mba hanamorana ny fanazavana amin'ny mpanjifa sy ny orinasa dia ampahafantariko azy ireo foana fa ny motera fikarohana Fanondroana pejy ary ampifanaraho amin'ny teny lakile manokana amin'ny atiny izay ao amin'io pejy io. Na izany aza, ry zareo laharana pejy iray miorina amin'ny lazany - adika matetika amin'ny backlinks amin'ny tranonkala hafa.
Ka… eritrereto hoe manana pejy amin'ny tranokalanao ianao hatramin'ny taona lasa izay milahatra tsara ary mifamatotra amin'ny loharano isan-karazany. Manangana tranokala vaovao ianao amin'izay, izay ialan'ilay pejy. Ny valiny dia rehefa mandady ny backlinks ireo motera fikarohana… na misy mpampiasa amin'ny tranokala hafa dia manindry ilay rohy… dia misy lesoka 404 ao amin'ny tranokalanao.
Ouh. Ratsy ho an'ny traikefan'ny mpampiasa izany ary ratsy ho an'ny mpampiasa ny motera fikarohana. Vokatr'izany, tsy miraharaha ny backlink ny motera fikarohana… izay farany mandatsaka ny fahefana sy ny laharan'ny tranokalanao.
Ny vaovao tsara dia ny backlinks amin'ny tranokala manam-pahefana tsy tena tapitra! Rehefa nanangana tranokala vaovao ho an'ny mpanjifa izahay ary nanitsy ny rohy taloha ho amin'ny votoaty vaovao… dia nijery ireo pejy ireo miakatra hatramin'ny tampon'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana izahay (SERP).
Raha manana maso ivoho mifantoka amin'ny fifamoivoizana amin'ny fikarohana voajanahary ianao (ary tokony hisy ny masoivohon'ny famoronana tranokala REHETRA) na raha manana consultant SEO ianao fa TSY nanao an'io asa io dia mino aho fa manao tsirambina ny asany izy ireo. Ny motera fikarohana dia mitohy ho loharanom-pifamoivoizana ho an'ireo prospect manan-danja manana fikasana hividy.
Ka noho izany… raha mamolavola endrika ny tranokalanao ianao dia ataovy izay hahazoana antoka fa manamarina sy mamindra ny fifamoivoizanao mankany amin'ny pejy vaovao ianao. Ary, raha tsy mamerina manamboatra ny tranokalanao ianao dia tokony mbola hanara-maso ireo pejy 404 anao ary hanitsy azy ireo tsara!
NAOTY: Raha tsy mifindra monina amin'ny tranokala vaovao ianao dia afaka mitsambikina mivantana amin'ny dingana faha-5 amin'ity dingana ity mba hanaraha-maso fotsiny sy hamindrana pejy 404.
Dingana 1: Fanaraha-maso mialoha ny fandefasana ny tranokala ankehitriny
Sintomy ny fananana rehetra ankehitriny - Ataoko amin'ny app OSX lehibe antsoina hoe ity SiteSucker.
Makà lisitry ny URL rehetra ankehitriny - Ataoko izany Frog.
Makà lisitry ny rohy miverina rehetra - mampiasa Semrush.
Ankehitriny, manana ny fananana rehetra sy ny pejy ao amin'ny tranokalan'izy ireo aho izao. Ity dia hahafahako mametraka ny sarintany tsirairay amin'ireo loharano ireo amin'ny làlana vaovao amin'ny tranokala vaovao (raha mila alefa izy ireo).
Dingana 2: Drafitra mialoha ny fandefasana ny toerana hierarchy, slugs ary pejy
Ny dingana manaraka dia ny fanaraha-maso ny tena atiny sy ny famaritana ny fomba hanamorana sy hanamboarana a tranomboky atiny voarindra tsara sy voalamina ao amin'ny tranonkala vaovao. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia manangana pejy tsy misy fotony aho amin'ny sehatra WordPress an-tsehatra mba hananako lisitry ny fanamarinana ho vita atsy aoriana mba hiasa ireo mpanoratra sy mpamorona ahy.
Azoko atao ny mandinika ireo URL taloha sy fananana taloha hamerenana ny laoniny ireo pejy drafitra mba ho mora kokoa ny manome antoka fa manana ny atiny ilaina rehetra aho ary tsy misy zavatra tsy ampy amin'ny tranokala vaovao izay teo amin'ilay tranonkala taloha.
Dingana 3: Fametahana mialoha ny fandefasana ireo URL taloha mankany amin'ireo URL vaovao
Raha afaka manatsotra ny firafitry ny URL isika ary manandrana mitazona ny pejy ary mandefa slug fohy sy tsotra, dia manao izany. Tsikaritro nandritra ny taona maro fa na ny fanodinana aza dia toa very fahefana… Ny fanatsarana azy ireo dia mitarika fitomboan'ny fifamatorana, izay midika ho toerana tsara kokoa. Tsy matahotra intsony aho avereno pejy iray avo lenta amin'ny URL vaovao rehefa misy dikany. Ataovy anaty takelaka ity!
Dingana 4: Famerenana alohan'ny famoahana import
Mampiasà takelaka amin'ny dingana 3, mamorona latabatra tsotra momba ny URL misy (tsy misy domains) sy URL vaovao (misy domain) aho. Manafatra ireo fanovana ireo aho ao amin'ny Laharana Plugin SEO SEO alohan'ny handefasana ilay tranokala vaovao. Rank Math no plugin WordPress tsara indrindra ho an'ny SEO, raha ny hevitro. Fanamarihana… ity dingana ity dia azo atao (ary tokony hatao) na dia ianao aza mamindra ny tranokala amin'ny sehatra vaovao.
Dingana 5: Mandrosoa Ary Araho ireo 404
Raha nahavita ny dingana rehetra ianao mandraka ankehitriny dia manana ilay tranokala vaovao ianao, miditra ao ireo fanodinana rehetra, ao anatin'ireo atiny rehetra ary vonona ny handefa azy ianao. Tsy mbola vita ny asanao… tokony hanara-maso ny tranokala vaovao ianao hahafantarana izay misy pejy 404 mampiasa fitaovana roa samy hafa:
Google Search Console - raha vantany vao misy ny tranokala vaovao, dia te-handefa ny sitemap XML ianao ary hijery ao anatin'ny iray andro na mihoatra raha misy olana amin'ny tranokala vaovao.
Laharana 404 Monitor SEO SEO Plugin - Ity dia fitaovana iray izay tokony hampiasainao matetika… tsy rehefa mandefa tranonkala fotsiny ianao. Ianao dia mila mampandeha azy ao amin'ny Dashboard Rank Math.
Ohatra, nanangana tranokala ho an'ny toerana marobe izahay Dentista manampahaizana manokana amin'ny ankizy manana fandrakofana Medicaid. Ny iray amin'ireo pejy hitanay fa misy rohy miverina izay tsy norakofana dia lahatsoratra iray, Nify Baby 101. Ny tranonkala efa nisy dia tsy nanana ny lahatsoratra. Ny masinina Wayback dia nisy sombiny ihany. Ka rehefa nandefa ilay tranonkala vaovao izahay, dia nataonay antoka fa manana lahatsoratra feno izahay, sary infografika ary sary sosialy miaraka amin'ny fanodinana ny URL taloha mankany amin'ilay vaovao.
Raha vantany vao nandefa ilay tranonkala izahay, dia nahita fa ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny redirect dia mankamin'ny pejy vaovao avy amin'ireo URL taloha ireo! Ny pejy dia nanomboka naka fifamoivoizana sy laharana mahafinaritra ihany koa. Tsy vita anefa isika.
Rehefa nanamarina ny Monitor 404 izahay, dia nahita URL marobe niaraka tamin'ny "nifin'ny zaza" izay tonga teny amin'ny pejy 404. Nanampy ny lalana marina marobe an'ny fanodinana ny pejy vaovao izahay. Fanamarihana… afaka mampiasa a fitenenana mahazatra hisambotra ny URL rehetra fa mitandrina kosa izahay hanombohana.
Ny pikantsary etsy ambony dia ny Rank Math Pro izay misy ny fahaizana manasokajiana ireo alehanao… endrika tena tsara. Niaraka tamin'ny Rank Math Pro ihany koa izahay satria manohana ny drafitra misy toerana maro.
Ankehitriny, ity pejy ity no pejy faha-8 be mpanondrana indrindra ao amin'ilay tranonkala vaovao ao anatin'ny herinandro iray nanombohana. Ary nisy pejy 404 tao nandritra ny taona maro isaky ny nisy tonga! Fotoana tena lehibe tsy nariana izay tsy ho hita raha tsy nitandrina izahay momba ny fanodinana sy fanaraha-maso tsara ireo rohy taloha izay nisy tamin'ny tranokalan'izy ireo.
Rank Math koa dia manana lahatsoratra feno tsipiriany momba ny fanamboarana lesoka 404 izay ampirisihako anao hamaky.
Laharana Math: Ahoana no manamboatra lesoka 404
Tags: 404404 lesokaHanaraha-masotranokala mandadykonsole fikarohana googlefampidirana fanovanamap urllaharana biolojikaplugin matematika laharanalaharana matematika seoplugin matematika seo laharanaambonyny fihodinanasahona mihiakafilaharan'ny fikarohanasemrushSEOseo filaharanaserpmpitroka tranonkalasitesuckerWordPress